NAB SHOW မှ NT CRYSTAL HERITAGE ဆုရရှိမည် WTMX-FM ချီကာဂို | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » NAB Show မှာ NAB crystal အမွေအနှစ် Award လက်ခံရရှိရန် WTMX-FM ရေချီကာဂို
NAB Show မှာ NAB crystal အမွေအနှစ် Award လက်ခံရရှိရန် WTMX-FM ရေချီကာဂို
အဆိုပါ လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး (NAB) ချီးမြှောက်မည် WTMX-FM ရေအဆိုပါကာလအတွင်းပေးအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်မှတ် NAB Crystal အမွေအနှစ် Award ဆုနှင့်အတူချီကာဂို, IL NAB ပြရန် အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပရေဒီယိုနေ့လယ်စာစားပွဲ, Las Vegas မှာဧပြီလ 19 ။ အဆိုပါအမွေအနှစ်ဆုချီးမြှင့်ခြွင်းချက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသိုင်းအဝိုင်းဝန်ဆောင်မှုအားထုတ်မှုများအတွက်ငါး Crystal ရေဒီယိုဆုတစ်ဦးစုစုပေါင်းအနိုင်ရပြီရေဒီယို station အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ သာ အခြားအငါးခု ဘူတာပု NAB Crystal ရေဒီယိုဆုများ၏သမိုင်း၌ဤဂုဏ်အသရေကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။
"ဟုအဆိုပါအသိုင်းအဝုိင်းမှပြန်ပေးခြင်းကြီးမားတဲ့ကျနော်တို့နေသော၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့ WTMX မှာလုပ်ပေးသည်။ ဒါဟာအမြဲ been- ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းသွားနှင့်ယခု Hubbard ရေဒီယိုမိသားစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရှိပါတယ် "ဟု Hubbard ချီကာဂို Market က Manager ကယောဟနျသ Gallagher ကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း၏ထူးချွန်အလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည် WTMX တစ်ဒါဇင်ကြိမ် Crystal ဗိုလ်လုပွဲခဲ့ငါတို့သည် NAB Crystal အမွေအနှစ် Award ဆုလက်ခံရယူဂုဏ်ပြုနေကြတယ်။ "
ရေဒီယိုစခန်းများနိုင် တင်သွင်း ဇန်နဝါရီလ 29 သည်အထိတစ်ဦး Crystal ရေဒီယိုဆုချီးမြှင့်ဘို့အ entries တွေကို။
မှာ NAB ပြရန် ASCAP ကကမကထရေဒီယိုနေ့လယ်စာစားပွဲ, NAB ယခုနှစ် 10 Crystal ရေဒီယိုဆုချီးမြှင့်ဆုရရှိသူနှင့် 50 ဆန်ကာတင်ချီးမြှောက်မည်။ သူ Mike Golic နှင့်သူ Mike Greenberg, ESPN ရေဒီယိုရဲ့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် "သူ Mike & သူ Mike" Fame ၏ NAB အသံလွှင့်ခန်းမသို့မဝငျပါလိမ့်မည်။ ရေဒီယိုနှင့် host ကို web စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ကင်မ် Komando ယင်းနေ့လယ်စာစားပွဲမှာပြောရမှာပီဖြစ်လိမ့်မည်။
NAB ပြရန်, ကျင်းပဧပြီလ 16-21, Las Vegas မှာ 2016, ဖန်တီး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အားလုံးပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာပေးပို့ဖုံးအုပ်ထားသည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ 103,000 နိုင်ငံများနှင့် 166 + ပြသခဲ့သည်ထံမှ 1,700 တက်ရောက်နှင့်အတူ, NAB ပြရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အဆုံးစွန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းခြင်း မှစ. စားသုံးမှုရန်, မျိုးစုံပလက်ဖောင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမျိုးများကိုဖြတ်ပြီး, NAB ပြရန် ရိုးရာအသံလွှင့်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအသစ်ဖန်သားပြင်မှအကြောင်းအရာများပေးပို့လက်ခံသောဖြေရှင်းချက်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတ်ခရီးစဉ် www.nabshow.com.
လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသား Association ကနောက်ဆုံးရပို့စ်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
NAB နည်းပညာ Partners NEWALL-တံဆိပ် ACCESS session တင်ပြ - ဧပြီလ 12, 2016
2016 NAB SHOW နေရာမှာကြီးထွားလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ - ဧပြီလ 8, 2016
2016 NAB SHOW virtual reality Filmmaker, အကြောင်းအရာနှင့်နည်းပညာအတွက်အကြီးမားဆုံးအမည်များအင်္ဂါရပ်များ - ဧပြီလ 8, 2016
ယခင်: SCREENLIGHT, ပထမဆုံးဖြန့်ချိ, အခမဲ့ MARKER Import add-on ကို Adobe Premiere Pro အတွက်
နောက်တစ်ခု: တိုရွန်တိုအတွက်နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဟန်ပြဇန်နဝါရီလ 28th ကိုင်ထားရန်ဆင်းမ်ကဒ် Group မှ